ဆန္ဒပြသူများနဲ့ အဓိကရုဏ်းနှိမ်နင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရန်ကုန်။ (၀၆၊ ၀၂၊ ၂၀၂၁) (ယခင်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ)
ရန်ကုန်မှာ လမ်းမကြီးတွေပိတ်ဆို့ပြီး စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတာတွေကြာင့် ကားတွေပိတ်ကာ မဆိုင်သူတွေပါ အများကြီး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့နေတွေက ဆိုပါတယ်။ ဘာကြောင့် စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ အတင်းစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေ လုပ်တာဖြစ်နိုင်ပါလဲ။
ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ ရန်ကုန်သား တဦးကို ကိုဝင်းမင်းက ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ညပိုင်းက မေးရာမှာ၊ ထူးခြားမူကို အခုလိုစရှင်းပြပါတယ်။
အမည်မဖော်လိုသူ ရန်ကုန်သားတဦး ။. ။ ရန်ကုန်မှာ အထူးခြားဆုံးအနေအထားက မြို့ကြီး ၆ မြို့နယ်မှာ ကားတွေကို ပိတ်ပြီးတော့ စစ်နေတယ်ဗျာ။ အိမ်စီးကားတွေကို အဓိကထားပြီးတော့ စစ်တာပေါ့။ လူငယ်တွေပါလာရင် ပိုပြီးတော့စစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ တချို့လူကြီးတွေပါလာရင် နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ ဘယ်သွားဘာလုပ်မှာလဲဆိုပြီး သွားလို့ရတယ်။ လူငယ်တွေပါလာရင်တော့ ကားပေါ်ကဆင်းခိုင်းတယ်။ ဖုန်းတွေစစ်တယ်။ ဘော်ဒီ Check Up လုပ်တယ်။ အခုလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အခင်းအကျင်းက သုံးရက်ရှိသွားပြီ။ လမ်းကြီးတွေကို ပိတ်ပြီးတော့ စစ်တဲ့အခါကြတော့ ကားတွေလည်း ပိတ်ဆို့ကုန်ပါတယ်။ အချိန်ကုန်တယ်ဗျာ။ တချို့ရုံးသွား ရုံးပြန်တွေရှိတယ်။ တော်တော်လေးကို ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒါတွေက မျက်မြင်တွေ့ရတာလား။
အမည်မဖော်လိုသူ ရန်ကုန်သားတဦး ။. ။ ကျနော်ကားက အထက်ပန်းဆိုတန်းကနေပြီးတော့ ဘူတာကြီးကုန်ကျော်တံတားကို ဆင်းတဲ့အခါမှာ စပြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်။ မြို့ထဲကနေ အတက်ကားတွေကို ပိတ်စစ်တာ။ ကန်တော်လေးက တက်တဲ့ ကားတစီးချင်းစီကို သူတို့စစ်တာ။ မသင်္ကာတဲ့လူကိုစစ်တယ်။ လိုင်းကားဆိုရင် သူတို့ မသင်္ကာရင်စစ်တယ်။ တစီးလုံးကိုမစစ်ပဲ မသင်္ကာတဲ့သူကိုစစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် မှန်အနက်တွေကာထားတဲ့ကားတွေကိုစစ်တယ်။ အဲဒီကားတွေထဲမှာ လူငယ်တွေပါလာရင် ကားပေါ်ကနေ အကုန်ဆင်းခိုင်းတယ်။ တခါတလေမှာ လမ်းသွားလမ်းလာကို ဖြတ်ပြီးတော့ စစ်တာလည်းရှိသေးတယ်။ မသင်္ကာတဲ့ ကလေးတွေကို ခေါ်စစ်တာရှိတယ်။ လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ အဖိုးကြီးတွေ အဖွားကြီးတွေသွားနေတာမျိုး မိန်းမကြီးတွေသွားလာနေတာမျိုးကို မစစ်ဘူး။ တာမွေပလာဇာဖက်မှာလည်း စစ်နေတာကို တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီမှာ အလုပ်ကြမ်းလုပ်တဲ့ ကလေးတွေပေါ့ဗျာ။ လက်ထဲမှာလည်း တူတို့ လွှတို့ပါတယ်။ ခေါ်စစ်ပြီးတော့မှ ကလေးကတော့ မပြောတတ်ဖူးနဲ့တူတယ်ဗျ။ အဲဒီကလေးကို ပါးရိုက် ဆောင့်ကန် ဝိုင်းလုပ်ကြပြီးတော့ ကားပေါ်တင်သွားတာလည်း ကျနော်ကားရှေ့မှာတင်ဖြစ်သွားတာ။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဟုတ်ကဲ့။ ဘယ်မြို့နယ်တွေမှာ စစ်နေလဲ။
အမည်မဖော်လိုသူ ရန်ကုန်သားတဦး ။. ။ မြို့လည် ၆မြို့နယ်ပေါ့ဗျာ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ ကျောက်တံတား၊ ပန်းပဲတန်း နဲ့ လသာ အဲဒီဖက်မှာ စစ်တာများတယ်ဗျ။ ဇေယျာသော် အဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်း ရန်ကုန်ကို ပိုက်စိတ်တိုက်ရှာနေတယ်။ အဓိကလမ်းမကြီးတွေကို တဖက်ပိတ်စစ်တာ။ စစ်ကားတွေကို လမ်းမှာ ကန့်လန့်ဖြတ်ပိတ်စစ်တာ။ ရဲ နဲ့ ထွေအုပ်လည်းပါတယ်။ တဖွဲ့တဖွဲ့ကို ၄ဝ၊ ၅ဝလောက်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ထူးခြားမှုကရော။
အမည်မဖော်လိုသူ ရန်ကုန်သားတဦး ။. ။ ဒီနေ့ကတော့ နည်းနည်းချောင်တယ်။ အရင်လိုမျိုးလမ်းတိုင်းကိုတော့ စစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ဒီနေ့ဆိုရင် မြို့ထဲရောက်တယ်။ ပုဇွန်တောင်ရောက်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးရက်ကတော့ အရမ်းကို ပိတ်ထားတာ။ တနေရာစစ်ရင် တဖက်ပိတ်ထားလို့ ကားတွေက ၂ မိုင် ၃ မိုင်အထိ ရပ်နေကြရတာ။ ဆင်းလို့လည်းမရဘူး။ တချို့ ဆေးခန်းပြဖို့ချိန်းထားတာဆိုရင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ အချိန်မီမရောက်နိုင်တော့ဘူး။ အားလုံးက စိတ်မသက်မသာဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ ကိုထဲများဘာများပါလာမလဲ၊ ကိုယ်ဖုန်းထဲဘာများတွေ့မလဲ၊ တခါတလေ ဖုန်းထဲဘာမှမပါပဲ ။ ဖုန်းကောင်းရင်ကို သိမ်းတာရှိတယ်။ အိုင်ဖုန်းကိုင်ထားရင် ဒီကောင်တွေက အကြောင်းပြသိမ်းလိုက်တာ။ လူတွေက တော်တော်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာ။ ညဖက်တွေဝင်ဖမ်း ဆွဲတာတွေ များသောအားဖြင့်တော့ လူငယ်တွေရှိရာမှာ ဘောဒါဆောင်တွေမှာဖမ်းတာတွေ့နေရတယ်။ တချို့လည်း ပတ်သက်လို့ပါသွားတာရှိတယ်။ တချို့လည်း ဘု့မသိ ဘမသိပါသွားတာရှိတယ်။ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ လူငယ်တွေဖက်ကလည်း မကြေနပ်တာတွေကတော့ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတွေဖက်ကတော့ မကြေနပ်ကြဘူး။ ဒါကြီးကပြီးသွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ တချို့ဆိုရင် ကျူးကျော်အိမ်တွေဖျက်ခိုင်းတာတွေရှိမယ်။ လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေ ဖျက်ခိုင်းတာရှိတယ်။ နောက်မီတာတွေအတင်းဆောင်ခိုင်းတာရှိတယ်။ မီးလည်းဖြတ်တယ်ဗျ။ ရန်ကုန်လူထုကတော့ လုံးဝအစာမကြေတာတော့ရှိနေတယ်။
ရနျကုနျမှာ လမျးမကွီးတှပေိတျဆို့ပွီး စဈဆေးဖမျးဆီးနတောတှကွောငျ့ ကားတှပေိတျကာ မဆိုငျသူတှပေါ အမြားကွီး ဒုက်ခရောကျခဲ့ကွတယျလို့ ရနျကုနျမွို့နတှေကေ ဆိုပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ စဈကောငျစီအနနေဲ့ အတငျးစဈဆေးဖမျးဆီးတာတှေ လုပျတာဖွဈနိုငျပါလဲ။
ကိုယျတိုငျကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အမညျမဖျောလိုသူ ရနျကုနျသား တဦးကို ကိုဝငျးမငျးက ဒီဇငျဘာလ ၁ ရကျနညေ့ပိုငျးက မေးရာမှာ၊ ထူးခွားမူကို အခုလိုစရှငျးပွပါတယျ။
အမညျမဖျောလိုသူ ရနျကုနျသားတဦး ။. ။ ရနျကုနျမှာ အထူးခွားဆုံးအနအေထားက မွို့ကွီး ၆ မွို့နယျမှာ ကားတှကေို ပိတျပွီးတော့ စဈနတေယျဗြာ။ အိမျစီးကားတှကေို အဓိကထားပွီးတော့ စဈတာပေါ့။ လူငယျတှပေါလာရငျ ပိုပွီးတော့စဈတာကိုတှရေ့တယျ။ တခြို့လူကွီးတှပေါလာရငျ နညျးနညျးပါးပါးလောကျပဲ ဘယျသှားဘာလုပျမှာလဲဆိုပွီး သှားလို့ရတယျ။ လူငယျတှပေါလာရငျတော့ ကားပျေါကဆငျးခိုငျးတယျ။ ဖုနျးတှစေဈတယျ။ ဘျောဒီ Check Up လုပျတယျ။ အခုလကျရှိရနျကုနျမွို့ရဲ့ အခငျးအကငျြးက သုံးရကျရှိသှားပွီ။ လမျးကွီးတှကေို ပိတျပွီးတော့ စဈတဲ့အခါကွတော့ ကားတှလေညျး ပိတျဆို့ကုနျပါတယျ။ အခြိနျကုနျတယျဗြာ။ တခြို့ရုံးသှား ရုံးပွနျတှရှေိတယျ။ တျောတျောလေးကို ဒုက်ခရောကျကုနျကွပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒါတှကေ မကျြမွငျတှရေ့တာလား။
အမညျမဖျောလိုသူ ရနျကုနျသားတဦး ။. ။ ကနြျောကားက အထကျပနျးဆိုတနျးကနပွေီးတော့ ဘူတာကွီးကုနျကြျောတံတားကို ဆငျးတဲ့အခါမှာ စပွီးတှရေ့တာပေါ့နျော။ မွို့ထဲကနေ အတကျကားတှကေို ပိတျစဈတာ။ ကနျတျောလေးက တကျတဲ့ ကားတစီးခငျြးစီကို သူတို့စဈတာ။ မသင်ျကာတဲ့လူကိုစဈတယျ။ လိုငျးကားဆိုရငျ သူတို့ မသင်ျကာရငျစဈတယျ။ တစီးလုံးကိုမစဈပဲ မသင်ျကာတဲ့သူကိုစဈတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မှနျအနကျတှကောထားတဲ့ကားတှကေိုစဈတယျ။ အဲဒီကားတှထေဲမှာ လူငယျတှပေါလာရငျ ကားပျေါကနေ အကုနျဆငျးခိုငျးတယျ။ တခါတလမှော လမျးသှားလမျးလာကို ဖွတျပွီးတော့ စဈတာလညျးရှိသေးတယျ။ မသင်ျကာတဲ့ ကလေးတှကေို ချေါစဈတာရှိတယျ။ လူတိုငျးတော့မဟုတျဘူး။ ဥပမာ အဖိုးကွီးတှေ အဖှားကွီးတှသှေားနတောမြိုး မိနျးမကွီးတှသှေားလာနတောမြိုးကို မစဈဘူး။ တာမှပေလာဇာဖကျမှာလညျး စဈနတောကို တှနေ့ရေတယျ။ အဲဒီမှာ အလုပျကွမျးလုပျတဲ့ ကလေးတှပေေါ့ဗြာ။ လကျထဲမှာလညျး တူတို့ လှတို့ပါတယျ။ ချေါစဈပွီးတော့မှ ကလေးကတော့ မပွောတတျဖူးနဲ့တူတယျဗြ။ အဲဒီကလေးကို ပါးရိုကျ ဆောငျ့ကနျ ဝိုငျးလုပျကွပွီးတော့ ကားပျေါတငျသှားတာလညျး ကနြျောကားရှမှေ့ာတငျဖွဈသှားတာ။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ ဟုတျကဲ့။ ဘယျမွို့နယျတှမှော စဈနလေဲ။
အမညျမဖျောလိုသူ ရနျကုနျသားတဦး ။. ။ မွို့လညျ ၆မွို့နယျပေါ့ဗြာ။ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့ ၊ ကြောကျတံတား၊ ပနျးပဲတနျး နဲ့ လသာ အဲဒီဖကျမှာ စဈတာမြားတယျဗြ။ ဇယြောသျော အဖမျးခံရပွီးနောကျပိုငျး ရနျကုနျကို ပိုကျစိတျတိုကျရှာနတေယျ။ အဓိကလမျးမကွီးတှကေို တဖကျပိတျစဈတာ။ စဈကားတှကေို လမျးမှာ ကနျ့လနျ့ဖွတျပိတျစဈတာ။ ရဲ နဲ့ ထှအေုပျလညျးပါတယျ။ တဖှဲ့တဖှဲ့ကို ၄ဝ၊ ၅ဝလောကျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။။ ဟုတျကဲ့ ဒီနထေူ့းခွားမှုကရော။
အမညျမဖျောလိုသူ ရနျကုနျသားတဦး ။. ။ ဒီနကေ့တော့ နညျးနညျးခြောငျတယျ။ အရငျလိုမြိုးလမျးတိုငျးကိုတော့ စဈနတောမဟုတျဘူး။ ကနြျောဒီနဆေို့ရငျ မွို့ထဲရောကျတယျ။ ပုဇှနျတောငျရောကျတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ သုံးရကျကတော့ အရမျးကို ပိတျထားတာ။ တနရောစဈရငျ တဖကျပိတျထားလို့ ကားတှကေ ၂ မိုငျ ၃ မိုငျအထိ ရပျနကွေရတာ။ ဆငျးလို့လညျးမရဘူး။ တခြို့ ဆေးခနျးပွဖို့ခြိနျးထားတာဆိုရငျ အနှောကျအယှကျဖွဈတာပေါ့ဗြာ။ အခြိနျမီမရောကျနိုငျတော့ဘူး။ အားလုံးက စိတျမသကျမသာဖွဈတာပေါ့ဗြာ။ ကိုထဲမြားဘာမြားပါလာမလဲ၊ ကိုယျဖုနျးထဲဘာမြားတှမေ့လဲ၊ တခါတလေ ဖုနျးထဲဘာမှမပါပဲ ။ ဖုနျးကောငျးရငျကို သိမျးတာရှိတယျ။ အိုငျဖုနျးကိုငျထားရငျ ဒီကောငျတှကေ အကွောငျးပွသိမျးလိုကျတာ။ လူတှကေ တျောတျောကို စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈတာ။ ညဖကျတှဝေငျဖမျး ဆှဲတာတှေ မြားသောအားဖွငျ့တော့ လူငယျတှရှေိရာမှာ ဘောဒါဆောငျတှမှောဖမျးတာတှနေ့ရေတယျ။ တခြို့လညျး ပတျသကျလို့ပါသှားတာရှိတယျ။ တခြို့လညျး ဘု့မသိ ဘမသိပါသှားတာရှိတယျ။ မကောငျးဘူးပေါ့ဗြာ။ လူငယျတှဖေကျကလညျး မကွနေပျတာတှကေတော့ ရနျကုနျသူ ရနျကုနျသားတှဖေကျကတော့ မကွနေပျကွဘူး။ ဒါကွီးကပွီးသှားမှာလညျးမဟုတျဘူး။ တခြို့ဆိုရငျ ကြူးကြျောအိမျတှဖေကျြခိုငျးတာတှရှေိမယျ။ လမျးဘေးဈေးဆိုငျတှေ ဖကျြခိုငျးတာရှိတယျ။ နောကျမီတာတှအေတငျးဆောငျခိုငျးတာရှိတယျ။ မီးလညျးဖွတျတယျဗြ။ ရနျကုနျလူထုကတော့ လုံးဝအစာမကွတောတော့ရှိနတေယျ။